UNzimande uhlaba eyokufukula izakhiwo emanyuvesi – Journalismiziko
Home›Education›UNzimande uhlaba eyokufukula izakhiwo emanyuvesi
Ungqongqoshe wezemfundo emabangeni aphakeme uDkt Blade Nzimande uthi umnyango ngeke ulekelele ngemali engu R750m ukukhuculula izakhiwo nezinye izithiyo ezikhungweni zemfundo ephakeme.
Lokhu kuza emuva kokuba lo mnyango uzongelwa isizumbulu sika R86m sokwemukela abafundi kunyaka ozayo ngokwehlukana kwemikhakha yezuqu zabo. UNzimande ukhiphe lezi zimpendulo ngesikhathi ephonswa ngemibuzo yilunga le Democratic Alliance (DA) u-Bellinda obebuza ngenxa yezinsolo zemibiko yokufinyezwa kwezimali zemishikashika yokukhuculula inqalasizinda okuzomiswa ngenhloso yokonga imali. UNzimande uzichithile izinsolo zokuthi umnyango uhlele ezinye izinguquko okubalwa kuzo nokunciphisa sabafundi abazomukelwa ezikhungweni ngonyaka ozayo.
“zonke izicelo zokukhuculwa kwezakhiwo zemfundo ephakeme zisazocutshungulwa ngendlela bese zithola uxhaso. Nalabo abese kuqinisekisiwe ukuba bazoluthola uxhaso ngemali yokufunda nabo futhi bazohlomula. Iminyango efanele ayikwazanga ukusinika izimpendulo ngezinqubeko zika 2020 ngenxa ye COVID19”, kusho uNzimande.
Inxenye yokuqala kulemali ingu R84m ingeyokuxhasa abafundi abangu 1210 abebesohlelweni langonyaka owedlule ebese inxenye ka R86 isalindele ukuba kuphothulwe uxhaso kulonyaka. Le mali ingezinye ezitholakale izinhlelweni zikaHulumeni zokonga ziphinde zitshale imali.